အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2019 - သတင်း Rule
iPhone ကို, ဟွာဝေး, Samsung နှင့် OnePlus နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အဆင့်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2019: iPhone ကို, ဟွာဝေး, Samsung နှင့် OnePlus နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အဆင့်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, တနင်္လာနေ့ဇွန်လ 10 ရက်နေ့တွင် theguardian.com သည် 2019 05.47 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးလိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာမသိဘူး? ဤတွင် Apple မှလက်ရှိထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်သောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်, Samsung က, ဟွာဝေး, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဟန်းဆက်ကိုရွေးချယ်ရာတွင် OnePlus နှင့်အခြားသူများကကူညီမည်.
အရင်ကထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်အရည်အသွေးပြည့်ဟန်းဆက်များဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ဟန်းဆက်များကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကို ၀ ယ်ရန်ပိုကောင်းသည့်အချိန်မရှိခဲ့ပါ။. သင်၏ ဦး စားပေးသည်နှစ်ရက်ကြာဘက်ထရီသက်သက်လား, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည် (သို့) အံ့မခန်းဖွယ်မြင်ကွင်း, ကနေရှေးခယျြစရာအများကြီးရှိပါတယ်.
ထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဂါးဒီးယန်းဝယ်သူ၏လမ်းညွှန်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများထုတ်ပြန်ခဲ့သည် 10 ဇွန်လ 2019, နှင့်ထိုအချိန်ကအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်မော်ဒယ်များကိုကိုယ်စားပြုတယ်. အသစ်မော်ဒယ်များအဖြစ်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးနေကြသည်, သင့်အတွက်မှန်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီရန်ဤလမ်းညွှန်ကိုအသစ်ပြုပြင်မည်.
ဂါးဒီးယန်းအသစ်ဝယ်သူရဲ့လမ်းပြတစ် ဦး မှကြိုဆိုပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်စာရေးသူမှနာရီပေါင်းရာနှင့်ချီသောစမ်းသပ်မှုများကိုကိုယ်စားပြုပြီးအကြံပြုထားသောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများစာရင်းကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်ရန်အတွက်သင်သည်အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုနာရီများစွာလုပ်စရာမလိုဘဲကျန်အရာများကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။.
Guardian သည်တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုများမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူထားသောပစ္စည်းများမှကော်မရှင်ငယ်တစ်ခုရရှိနိုင်သည်, ဒီ ၀ ယ်သူ၏လမ်းညွှန်တွင်ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများကိုမည်သည့်ကြော်ငြာရှင်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပဏာမခြေလှမ်းမှသြဇာမပါဘဲစမ်းသပ်ပြီးထည့်သွင်းထားသည်.
အကောင်းဆုံးခြုံငုံ: OnePlus7Pro ကို
အဆိုပါ OnePlus7Pro မှာအကြီးအကျယ်ရှိတယ်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မျက်နှာပြင်, သည်မိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးအလိုက်အလျင်မြန်ဆုံးခံစားနိုင်သောဖုန်းဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်များဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် In-display fingerprint scanner ပါရှိသည်.
ဤရွေ့ကားပုံမှန် update လုပ်အပေးအယူတတိယပါတီစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်ရင်းမြစ်ခဲ့သည်. စာဖတ်သူမှ နှိပ်၍ ၀ ယ်ယူပါကဂါးဒီးယန်းသည်ကော်မရှင်အသေးစားတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်.
နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုလျှော့ချပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောနည်းလမ်းအားလုံးနီးပါးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများကိုပေးစွမ်းသည်. အဆိုပါ OnePlus7Pro သည်ကုမ္ပဏီ၏အကြီးမားဆုံးဖြစ်သော 6.Hin QHD + AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့်အတူရှိသေးသည်, အရာပွဲတစ်ပွဲမဆိုဖုန်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ၎င်းသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် 60Hz နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 90Hz နှုန်းသည် refHz နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်စာရင်းများမှတဆင့် scrolling လုပ်ခြင်းအထိဂိမ်းများကို super slick မှတဆင့်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်စေသည်။.
မျက်နှာပြင်သည် ဦး တည်ရာတိုင်းအတွက်အစွန်းမှအစရှိသည်, selfie ကင်မရာကိုလိုအပ်သည့်အခါဖုန်း၏ထိပ်ဘက်မှပေါ်ထွက်လာသည့်မော်တာတပ်ဆင်ထားသည့်အတွက်ပြိုင်ဘက်များကိုထိုးနှက်သည့်ထစ်များကြောင့်မည်သည့်ကျူးကျော်မှုမှမရှိခြင်း.
မြန်နှုန်းဂိမ်း၏အမည်ဖြစ်သည်. အဆိုပါ OnePlus7Pro သည်မိုင်ပေါင်းများစွာဖြင့်အမြန်ဆုံးခံစားနိုင်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်. ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ Android ၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်9OxygenOS လို့ခေါ်တယ်ပိုင်, အရာ On-par ကို Google ရဲ့နှင့်အတူ Pixels အပေါ်, နှင့်အခြားထိပ်တန်း -of-the-line ကိုဟာ့ဒ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်.
၎င်းတွင် Qualcomm ၏နောက်ဆုံးပေါ် Snapdragon ရှိသည် 855 Processor ​​ကို, အနည်းဆုံး RAM 6GB နှင့်သိုလှောင်မှု 128GB. သို့သော်သိုလှောင်မှုသည်ပြိုင်ဘက်များထက် UFS3.0 စံအသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းထက်များစွာမြန်သည်, ထို့အပြင်နေ့စဉ်သုံးသုံးစွဲမှုကွာခြားချက်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည်.
Optical In-Display Fingerprint Scanner သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ၎င်းကို Huawei P30 Pro နှင့်မြန်နှုန်းအတွက်ရိုးရာ capacitive sensor များနှင့်ကိုက်ညီသည်.
ကျောဘက်ရှိသုံးဆကင်မရာစနစ်သည်ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော 48MP အဓိကပါဝင်သည်, 16MP Ultra-wide ထောင့်နှင့် 8MP တယ်လီဖုန်းကင်မရာတို့ဖြစ်သည်. ဒါဟာ P30 Pro ကိုရိုက်နှက်လို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအသေးစိတ်နှင့် utility ကိုအပေါ်ကြွင်းသောအရာကိုက်ညီသို့မဟုတ်ရိုက်နှက်.
ဘက်ထရီသက်တမ်းကကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့် Huawei ရိုက်နှက်ခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး. OnePlus ၏ WarpCharge စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အလွန်လျင်မြန်သည်, ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမကြိုးမဲ့ charging ကိုရှိပါတယ်, တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းအရာဖြစ်ပါသည်. ၎င်းသည်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိရေခံနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ. ၎င်းမှာစျေးကွက်အများစုတွင် dual-sim အထောက်အပံ့ရှိသည်.
အဆိုပါ OnePlus7Pro သည်လည်း 5G ဗားရှင်းတွင်ပါလာသည်, အရာတစ်ခုတည်းသော sim ပေမယ့်တူညီတဲ့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်, အလေးချိန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည် 4G တစ်ခုတည်းသော version ဖြစ်ပြီးရရှိနိုင်ပါသည် သီးသန့်ဗြိတိန်ရှိ EE မှ ၂၄ လ£ ၅၉ / လအစီအစဉ်ဖြင့်ပေါင် ၁၇၀ မှစတင်သည်.
ပြိုင်ဘက်ကင်းမျက်နှာပြင်, သက်သက်မြန်နှုန်းနှင့် In-display fingerprint scanner, slick OxygenOS နှင့်ပေါင်းစပ်သည်, ပင်သာမန်အလုပ်များကိုပျော်ရွှင်စေပါ. ကြီးမားသော OnePlus7Pro သည်ကျိန်းသေအသုံးပြုရန်အတွက်အကျယ်တဝင့်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အောင်တန်ဖိုးရှိလမ်းပိုင်းပါပဲ
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: OnePlus7Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: တိုင်းလမ်းအတွက်ပကတိသားရဲ၏
အကောင်းဆုံး iOS: Apple iPhone XS
Apple ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးအသစ်သော iPhone လည်းပါဝါကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်, အရွယ်, မျက်နှာပြင်နဲ့ camera.
အကောင်းဆုံး iPhone သည်အကြီးမားဆုံးသို့မဟုတ်ဈေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ပါ. iPhone XS ဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပေါင်းစပ်ထားတယ်, ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစား 5.8in မျက်နှာပြင်, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များကို Apple မှယနေ့အထိဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအရာအဖြစ်သို့.
Apple ၏ Face ID သည်စီးပွားရေးတွင်အကောင်းဆုံးမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်ဖြစ်သည်, ကျောဘက်ရှိကင်မရာနှစ်လုံးစနစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်, A12 Bionic ပရိုဆက်ဆာ၏စွမ်းဆောင်ချက်နှင့် iOS ၏အတန်းရှေ့ ဦး ဆောင်သော gesture navigation system ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်, yore ၏ iPhones ၏ home ခလုတ်ကိုအစားထိုးလိုက်သည်.
သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုငါးနှစ်ခန့်အဘို့အတန်းစီလည်းပါတယ်, မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆိုအခြားအမှတ်တံဆိပ်ထက်အနည်းဆုံးနှစ်ခုထက်ပိုသောဖွယ်ရှိသည်. iPhone XS သည်သတ္တုနှင့်ဖန်သားညှပ်ပေါင်မုန့်ဖြစ်သည်, နှင့်ကျဆင်းသွားသည့်အခါရုံယှဉ်ပြိုင်မှုကဲ့သို့ရိုက်နှက်ပါလိမ့်မယ်, သို့သော်သံမဏိနှစ်ဖက်စလုံးနှင့်နောက်ကျောဖန်များကအခြားဖုန်းများနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိသည့်ဇိမ်ခံခံစားမှုကိုရရှိစေသည်. ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီကိစ္စကိုလူအများစုကတင်ထားကြလိမ့်မယ်.
အကြီးမားဆုံးဆိုးကျိုးများမှာစျေးနှုန်းဖြစ်သည်, £ 1000 မှာယှဉ်ပြိုင်မှုထက်သိသိသာသာပိုပြီးဖွယ်ရှိသည်, နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း, အရာသာအလတ်စားအသုံးပြုမှု၏တစ်ရက်အကြောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲ. iPhone XS တွင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့် USB-C မှ Lightning cable မှအမြန်အားသွင်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်, ဒါပေမယ့်သေတ္တာထဲမှာနှေးကွေးအားသွင်းနှင့်အတူသာသင်္ဘော. ၎င်း၏ဆယ်လူလာ modem စွမ်းဆောင်ရည်သည်ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူပါ, သိပ်သည်းသောဒေသများတွင်အလုပ်လုပ်သော 4G ဒေတာဆက်သွယ်မှုကိုဆက်လက်ထားရှိရန်ပိုရုန်းကန်နေရသည်, အထူးသဖြင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 20 Pro ကို.
သင် iOS ကိုသော့ခတ်နေလျှင်, သို့မဟုတ်အရှည်ဆုံး software update ကိုလွှမ်းခြုံချင်တယ်, ထို့နောက် iPhone XS သည်သင်ဝယ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး Apple စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည် (နှင့်သိပ်ဝေးမ Mate နောက်ကွယ်မှ 20 အလုံးစုံ Pro ကို), အရွယ်အစား၎င်း၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကင်မရာက, စွမ်းရည်နှင့်ဇိမ်ခံခံစား.
ဝယ်ပါ: မင်းကအကောင်းဆုံး iPhone လိုချင်တယ်
မဝယ်ပါနဲ့: သငျသညျ£ 999 ဖြုန်းသို့မဟုတ် Android ကိုအသုံးပြုချင်ကြပါဘူး
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Apple iPhone XS ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ရှေ့ဆက်ခြေလှမ်းနှစ်ခု, နောက်တစ်ဆင့်
အကောင်းဆုံးသေးငယ်သည့် Android: Samsung Galaxy S10
တစ်ဦးကကြီးမားသော, သေးငယ်တဲ့ဖုန်းတွင်လှပသောမျက်နှာပြင်, Galaxy S10 သည် Samsung ၏အထင်ကရစမတ်ဖုန်းလိုင်းတွင်အစက်အပြောက်ဖြစ်သည်.
သင်တစ် ဦး ကြီးတွေအကြားချိုမြိန်အစက်အပြောက်ချင်လျှင်, ကိုင်တွယ်ရန်နှင့်အိတ်ကပ်ထဲ ၀ င်ရောက်ရန်လွယ်ကူသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်နှင့်ဖုန်းအရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း, သော Galaxy S10 ပါပဲ.
အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိအပေါက်ငယ်များပါသော ၆.၁ လက်မ QHD + AMOLED မျက်နှာပြင်သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ရုပ်ရှင်အများစုကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ကြီးမားသည်.
ပတ်ပတ်လည်သေးငယ်သည့် bezel များသည်ပြိုင်ဘက်များနှင့်ယှဉ်လျှင်ဖုန်းကိုအတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းစေသည်, ထိုသို့လည်းအလင်းပါပဲ. ဒါဟာဆဲဖန်ခွက်နှင့်သတ္တုသားညှပ်ပေါင်မုပါပဲ, ဆိုလိုတာကရေတံခွန်ကိုကာကွယ်ဖို့ကိစ္စတစ်ခုသင်လိုအပ်လိမ့်မယ်.
display အောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော ultrasonic fingerprint sensor သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်, ဒါကြောင့်မဟုတ်တော့စျေးကွက်အပေါ်အမြန်ဆုံး.
Samsung ရဲ့တစ်ခုမှာတစ်ခုက UI ကို software ကို, Android ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့9ဌပနာမုံ့, ကြီးမားသောဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကြီးမားသောခုန်ခြင်းဖြစ်သည်, သင်ထိတွေ့ရမည့်အရာများကိုဖန်သားပြင်အောက်ခြေနှင့်ထိပ်ဆီသို့သတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းခြင်း. Samsung သည်ရိုးရာလမ်းညွှန်ခလုတ်များသို့မဟုတ်ပွတ်ဆွဲအမူအယာများကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်.
Samsung မှသုံးနှစ်ကြာဆော့ဖ်ဝဲအထောက်အပံ့ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်, ကုမ္ပဏီသည် Android ဗားရှင်းအသစ် update များကိုမကြာခဏပေးပို့ရန်နှေးသော်လည်း.
အနောက်သုံးချောင်းကင်မရာသည်သင့်အားချဲ့ရန်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် 0.5 2x မှတဆင့်, နှင့် 10x စပ် zoom ကိုရန်. Huawei P30 Pro ကိုအနိုင်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်သူကကြွင်းသောအရာနှင့်အတူတက်တတ်၏. Selfie ကင်မရာသည်မျက်နှာပြင်ကိုတည့်တည့်မှေးမှိန်သွားပြီးစျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီသက်တမ်းဟာ S10 ရဲ့တစ်ခုအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအသုံးပြုမှု၏တစ်ရက်ကြာရှည်ပေမယ့်အများကြီးမပိုပါလိမ့်မယ်. တစ်နေ့တာတွင်ဖြည့်ရန် cable နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုများပါရှိပြီးကြိုးမဲ့ပါဝါဝေမျှခြင်းသည်ဖုန်းကိုအခြားကိရိယာများအတွက် ad-hoc ကြိုးမဲ့ charger အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။.
အဆိုပါကြီးတွေ, သေးငယ်တဲ့ဖုန်းတလုံးရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာပြင်ဟာအဓိကရောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်းကူညီကြည့်ရှုသည်
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Samsung ရဲ့ Galaxy S10 ပြန်လည်သုံးသပ်: မွှေးပွဲချင်းပြီး
အကောင်းဆုံးကင်မရာ: Huawei က P30 Pro ကို
Huawei P30 Pro တွင်ကြီးမားသောပစ္စည်းရှိသည်, လှပသောမျက်နှာပြင်, ကြာရှည်ခံသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ထူးခြားသောအလင်းနည်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းကင်မရာ, 5က x optical zoom နှင့် 50x ဒီဂျစ်တယ် zoom အထိ.
ဖုန်း၏အကောင်းဆုံးကင်မရာမှာ Huawei P30 Pro ဖြစ်သည်. အခြားမည်သည့်ဖုန်းမှ Huawei ၏ Leica quad ကင်မရာကဲ့သို့ပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်မှုမျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ.
20MP 0.6x ultra-wide angle ကင်မရာသည်ပျော်စရာကောင်းသည်, အဓိက 1x 40MP ကင်မရာသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးအခြားစမတ်ဖုန်းများထက်သင့်ကိုပိုမိုနီးကပ်လာစေမည့် periscopic 5x optical zoom ကင်မရာဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။. ငါးကြိမ်ချဲ့မလုံလောက်ခဲ့လျှင်, ထိပ်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံး 10x hybrid zoom ပြီးတော့ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူး 50x အထိအထိရှိပါတယ်. 3D-sensing time-sensing time-of sensor သည်ကျောဘက်ရှိ module များကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်.
ဘေးဖယ်၏ထူးခြားသောအဆင့်ဆင့်, P30 Pro တွင်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းနည်းသောအလင်းရောင်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲညကိုတစ်နေ့တာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။.
ကျန်တဲ့ဖုန်းကအရမ်းကောင်းတဲ့အရောင်ရွေးချယ်စရာတွေနဲ့အရမ်းကောင်းတယ်. FHD + OLED 6.47in ကြီးသည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, ထိပ်ဆုံးတွင် selfie ကင်မရာနှင့်ပါးလွှာသော bezels များပါ ၀ င်သောအသေးတစ်ခုနှင့်အတူ. ကွေးကောက်နံပါတ်တွေကဖုန်းရဲ့အကျယ်ကို ၇၃.၄ မီလီမီတာကိုကျဉ်းမြောင်းအောင်ထားတယ်, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အတော်အတန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့် OnePlus နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နေ့စဉ်သုံးစွဲရန်လွယ်ကူသည်7Pro သို့မဟုတ် iPhone XS Max.
In-screen optical fingerprint sensor သည် OnePlus ပြီးလျှင်ဒုတိယဖြစ်သည်7လိုလားသူရဲ့. Huawei ၏ထိပ်တန်းထစ် Kirin 980 Processor ​​ကို, 8RAM ၏ GB နှင့်သိုလှောင်မှု 128GB, စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးနှစ်ရက်ပတ်ပတ်လည်ကြာရှည်ခံမည့်ဘက်ထရီကိုထောက်ပံ့ပေးသည်. Plus အားအလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းနိုင်ပြီးကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်ပါဝါဝေမျှခြင်းများရှိသည်.
Huawei ၏ပြုပြင်ထားသော Android9ဌပနာမုံ့, EMUI 9.1, အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်အပြင်အင်္ဂါရပ်များများစွာပါ ၀ င်သော်လည်းလူတိုင်း၏အရသာနှင့်မကိုက်ညီပါ. Huawei သည်အမေရိကန်၏ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် အမေရိကန် - တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ, အရာ ၎င်း၏အနာဂတ်မသေချာမရေရာစေသည်. အဆိုပါ P30 Pro ကို ပုံမှန်အဖြစ် updates များကိုဆက်လက်လက်ခံရရှိသင့်ပါတယ်, သို့သော်.
ကင်မရာသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်, gimmick- ဖြည့်နည်းလမ်းတွေမဟုတ်ပါဘူး, ဖုန်း၏ကျန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေစဉ်
မဝယ်ပါနဲ့: သင်ကဖုန်းသေးသေးလေးကိုလိုချင်တယ် (သို့) အမေရိကန်ဟွာဝေ၏ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုသင်စိုးရိမ်သည်
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Huawei က P30 Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကင်မရာ, ကြယ်ဘက်ထရီသက်တမ်း
အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး: OnePlus 6T
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်, £ 500 မှာ OnePlus 6T ကိုပိုကောင်းအောင်အများကြီးသုံးရမယ်.
သင်တစ် ဦး အကြီးအကျယ်ချင်လျှင်, ထိပ်တန်း spec ဖုန်း, ဒါပေမယ့်£ 900 မဖြုန်းချင်ကြဘူး, ထို့နောက် OnePlus 6T သည်ဝယ်ယူရန်တစ်ခုဖြစ်သည်.
၎င်းသည်ကြီးမားပြီးလှပသော 6.41in HD OLED မျက်နှာပြင်ရှိသည်, အလွန်သေးငယ်သောမုဆိုးမများသည် selfie ကင်မရာအတွက်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည်, ပါးလွှာသော bezels များနှင့်အခြားလူအများစု၏အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီသောကောင်းမွန်သောခံစားမှုရှိသည့်သတ္တုနှင့်ဖန်ထည်များ.
၎င်းတွင် top-of-the-line ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည်, 6RAM ကို GB ကို, 128သိုလှောင်မှု GB နှင့်နာရီ ၃၀ ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်. အဆိုပါ OnePlus အပေါ်အန်းဒရွိုက်အတွေ့အကြုံကို, အောက်စီဂျင် OS, Google ရဲ့ Pixel မှာဒုတိယလိုက်တယ်; ဒါကြောင့်ရက်စက်စွာရက်စက်စွာလည်ပတ်မှုအတွက်ချောမွေ့သည်. OnePlus သည်နှစ်နှစ်ဆော့ဝဲလ်မွမ်းမံမှုနှင့်ဖုန်းလွှတ်ပေးသည့် နေ့မှစ၍ နောက်ထပ်နှစ်တစ်နှစ်၏လုံခြုံရေးမွမ်းမံမှုများကိုအာမခံပါသည်.
၎င်းတွင်အလွန်နိမ့်သော In-display fingerprint scanner လည်းရှိသည်, အရာသည်အကောင်းဆုံးဆက်ကပ်အပ်နှံ capacitive အာရုံခံကိရိယာများကဲ့သို့နီးပါးကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်, နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ယက်နှစ်ခုဆက်သွယ်မှုအတွက် dual-sim အထောက်အပံ့.
အားနည်းချက်တွေကကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်မကြီးဘူး, အတော်လေးကဒီမှာယှဉ်ပြိုင်မှုမကိုက်ညီကြောင်းကင်မရာ, တရားဝင်ရေခံနိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းမရှိပါ.
အလွန်သေးငယ်သော bezels ပါ ၀ င်သည့်ကြီးမားပြီးကြီးမားသည့်မျက်နှာပြင်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ software နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်, In-display fingerprint scanner နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာကဆိုလိုတာကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုရဖို့ဆိုရင်ပိုပြီးများများသုံးစွဲရမှာဖြစ်တယ်။.
ဝယ်ပါ: သင်ကထိပ်တန်းဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုချင်ပေမယ့်£ 500 ထက်ပိုပြီးမသုံးချင်ပါဘူး
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: OnePlus 6T ပြန်လည်သုံးသပ်: သင်ဤထက်ပိုကောင်းရဖို့နှစ်ဆသုံးဖြုန်းဖို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်
စမတ်ဖုန်းများကိုမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအရထောင့်ဖြတ်အလျားဖြင့်တိုင်းတာသည်. နံပါတ်ကပိုကြီးလေဖုန်းကြီးလေလေ, ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောဖုန်းများအမြင့်နှင့်အကျယ်ကွဲပြားခြားနားသောအချိုးကိုအသုံးပြုပါ.
၎င်းသည်ကိုင်တွယ်ရန်မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းနှင့်ဖုန်း၏အကျယ်နှင့်၎င်း၏အလေးချိန်ပေါ်မူတည်သည်. ဒါကကျဉ်းကျဉ်းနှင့်ပေါ့ပါးသည်, လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကိုင်ထားရတာလွယ်ကူလေလေ၊.
များသောအားဖြင့်ဖုန်းတွင်ရှိသောပရိုဆက်ဆာဟုခေါ်သောအရာသည်အမှန်တကယ်တွင်ပရိုဆက်ဆာကိုပေါင်းစပ်ထားသောစနစ် -on-a-chip ဖြစ်သည်, ဂရပ်ဖစ်နှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစနစ်များကိုတ ဦး တည်းသို့.
ယေဘုယျအားဖြင့် Processor အသစ်များသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီးဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်. Samsung က, Huawei နှင့် Apple တို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်သည်, Qualcomm သည်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့အကြီးမားဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်, Snapdragon 8-series မှာထိပ်ဆုံးမှာရှိသည်.
RAM (မှတ်ဉာဏ်) အသုံးပြုသည့်အခါသင်၏အက်ပ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသိမ်းဆည်းထားသောနေရာဖြစ်သည်, ဒါဆိုမင်းဖုန်းပိုကောင်းလေလေ, တစ် ဦး ပွိုင့်အထိ.
Android မှာ iOS ထက် RAM ပိုလိုအပ်တယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်. သို့သော် Android နှင့်အနည်းဆုံး 4GB RAM ကိုလက်ရှိအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်.
မှတ်ဉာဏ်နှင့်ကွဲပြားသည်, သိမ်းဆည်းခြင်းဆိုသည်မှာအရာအားလုံးကိုဖုန်းပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောနေရာဖြစ်သည်, အက်ပ်များနှင့်မီဒီယာများအပါအ ၀ င်. အချို့ဖုန်းများသည် microSD ကဒ်များဖြင့်သိုလှောင်မှုတိုးချဲ့နိုင်သည်, အများဆုံးမလုပ်နိုင်ပါ.
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနည်းဆုံး 64GB သိုလှောင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်သင့်သည်, သို့သော်များစွာသောဓာတ်ပုံများကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုပါကပိုလိုသည်. Spotify (သို့) ဂူဂဲလ်၏ဓာတ်ပုံများကဲ့သို့သော Cloud ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ဂီတကိုလျှော့ချနိုင်သည်, ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုအင်တာနက်သို့.
သင်၏ဖုန်းကိုဟက်ကာများမှကာကွယ်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်, ၎င်းသည် bug နှင့်လုံခြုံရေးတွင်း patch များအတွက် software updates များကိုအရေးပါစေသည်, ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ကင်မရာစသောအရာများကိုတိုးတက်စေခြင်း၊.
ဖုန်းအားလုံးပုံမှန် update ကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါ. အဟောင်းဖုန်းများ၏ Apple ရဲ့ထောက်ခံမှုန်းကျင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်5နှစ်ပေါင်း, Samsung နှင့် Google ရဲ့သုံးနှစ်အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏, ဖုန်းဖြန့်ချိသည့်အခါကနေနှစ် ဦး စလုံး – သင်ဝယ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူး.
Battery သက်တမ်းသည် Device များအကြားအကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားသည်, နှင့် “တနေကုန်ဘက်ထရီ” မကြာခဏမဆိုလိုပါ 24 စွဲချက်အကြားနာရီ. တချို့ကကြာရှည်မခံပေမည်, သငျသညျညနေပိုင်းတွင်ထွက်နေအထူးသဖြင့်လျှင်.
အများစုမှာအဆင့်မြင့် software algorithms နှင့် hardware ကိုပေါင်းစပ်ထားသောကွန်ပျူတာဓာတ်ပုံကိုသုံးသည်, ပုံမှန်အားဖြင့်ကင်မရာမျိုးစုံကိုဓာတ်ပုံတပုံတည်းလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်.
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကင်မရာ software ကိုဟာ့ဒ်ဝဲအဖြစ်အများကြီးခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်, နှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်အောင်အနည်းငယ်သောဒေသများတစ်ခုဖြစ်သည်.
ကင်မရာစုံစနစ်များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုကမ်းလှမ်းသည်, ထိုကဲ့သို့သောအသုံးဝင်သော zooms အဖြစ်, ပုံတူမုဒ်နှင့်အလင်းနည်းသောစွမ်းဆောင်ရည်, သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အညီအမျှဖန်တီးမထားပါ. 3D ကင်မရာတွေလည်းရှိတယ်, အရာမျက်နှာအသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြားပျော်စရာလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်.
megapixels အရေအတွက် (အမတ်) ထို့အပြင်ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်. MP ပိုများတာဟာပိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့မကိုက်ညီပါဘူး, သို့သော်ခေတ်မီစမတ်ဖုန်းကင်မရာများသည် 48MP sensor များမှ 12MP ရိုက်ချက်များကိုထုတ်လုပ်ရန် pixel ပေါင်းများစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်, ဥပမာအားဖြင့်.
ကြိုးမဲ့အားသွင်း: အဆင်ပြေ, သို့သော်ကေဘယ်လ်ကြိုးများထက် ပို၍ နှေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အားသွင်းကြိုးသည်သေတ္တာထဲမလာပါ
ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းတန်ဖိုး: iPhone အများစုဟာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်
LCD နှိုင်းယှဉ် OLED: OLED ဖန်သားပြင်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလင်းကိုထုတ်လွှတ်သဖြင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလူမည်းများနှင့်ပိုမိုတောက်ပသောအရောင်များရှိသည်, LCD ဖန်သားပြင်စျေးနှုန်းချိုသာနေစဉ်
Apple ရဲ့အနည်းငယ်စျေးသက်သာသော iPhone XR က iPhone XS ၏အင်္ဂါရပ်အများစုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်. ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပိုဆိုးတဲ့ကင်မရာရှိပါတယ်, အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့, ဒါပေမယ့်ပိုဆိုးတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့လူမီနီယံနဲ့ဖန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့, သံမဏိအစား, ယင်း၏ဇိမ်ခံခံစားမှုနှင့်၎င်းသည် Apple ပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအသိပညာဆုံးရှုံးခြင်း.
iPhone XR သည်အနီရောင်ဖြင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်, ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမဆိုလမ်းပိုင်းအားဖြင့်စျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး, ပြိုင်ဘက်များထံမှစစ်မှန်သောအထင်ကရဖုန်းများထက်များများသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကုန်ကျစရိတ်များ. iPhone XS ကိုသင် iPhone လိုချင်ရင်ဝယ်ဖို့တစ်ခုပဲ, ဒါပေမယ့်သင်ငွေစုချင်တယ်ဆိုရင်, Android သို့ပြောင်းပါ.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: iPhone XR ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: Apple ရဲ့စျေးနှုန်းချိုသာဘက်ထရီရှငျဘုရငျကို
မင်းမှာ iPhone ရှိရင်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိရမယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် iPhone XS Max သည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်သူကပိုလို့တောင်စျေးကြီးပြီးပိုကြီးပြီးပိုလေးတယ်, နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုင်တွယ်ရန်တော်တော်ခက်ခဲစေသည်, ဆိုလိုတာကသေးငယ်တဲ့ iPhone XS ကပိုကောင်းတယ်.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: iPhone ကို XS မက်ပြန်လည်သုံးသပ်: Apple ရဲ့ supersized စမတ်ဖုန်း
6.4in QHD + display ပါသည့်အကြီးဆုံး S10 ၏ဗားရှင်းသည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်တွင်မဆိုအကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်ရှိသည်. အဆိုပါဘဲဥပုံ -shaped အပေါက် - လာကြတယ်ထစ်ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်, နှစ်ခုကောင်းသော selfie ကင်မရာများပါဝင်သည်. နောက်သုံးဆနောက်ကင်မရာကကောင်းတယ်, ဒါပေမယ့် Huawei P30 Pro မှာပြaနာမရှိပါဘူး. စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပါတယ်, ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကအကောင်းဆုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာပါ.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Samsung ရဲ့ Galaxy S10 + ပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်ရိုးရှင်းစွာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်
စျေးနှုန်း: £ 899 / $899
Samsung ၏ Galaxy Note ကို9နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း, ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်, ကြီးမားတဲ့ screen နဲ့အရေးကြီးတဲ့ S Pen တံဆိပ်ပါ. သင်တစ် ဦး ကုန်ထုတ်စွမ်းအား powerhouse ရှာနေလျှင်, ထိုမှတ်ချက်9ဟုတ်လား. ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ရက်စွဲပါဒီဇိုင်းနှင့်အတူလည်းကြီးမားပါတယ်.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Samsung ၏ Galaxy Note ကို9ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အဆိုပါလုပ်အရာအားလုံးကိုဖုန်း
ဟွာဝေး Mate 20 Pro ကို
အိမ်ထောင်ဖက် 20 Pro ကကြီးမားတယ်, QHD + မျက်နှာပြင်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော 6.39in, ခန္ဓာကိုယ်, ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်ထိပ်တန်းဖုန်းဖြစ်လာသည် 2018. သို့သော်, 3x optical zoom ပါ ၀ င်သည့်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောသုံးဆကင်မရာစနစ်သည် Huawei ၏ P30 Pro အသစ်ထက်ကျော်လွန်သွားပြီ, 5x optical zoom ပါ ၀ င်သည့် Leica quad ကင်မရာပါရှိသည်. ဒါဟာအပေးအယူများအတွက်ထွက်ရှာဖွေရကျိုးနပ်သည်, အထူးသဖြင့် အကယ်၍ သင်သည် 3D face unlock option ကိုလိုချင်ပါက.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: ဟွာဝေး Mate 20 Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ဖြတ်တောက်ခြင်း - အစွန်းတောက်ပ
Huawei ၏ Honor အမှတ်တံဆိပ်သည်စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းဖုန်းကောင်းများအတွက်နာမည်ကြီးခဲ့သည်. View20 သည်အရင်လုပ်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးမှာပေါင် ၅၀၀ သာရှိသည်.
၎င်းတွင်ထိပ်တန်း Huawei Kirin ရှိသည် 980 Processor ​​ကို (အဆိုပါ Mate တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် 20 Pro ကို), လှပသော 6.4in FHD + LCD ဖန်သားပြင်, သိုလှောင်မှုများများ,6ဒါမှမဟုတ် 8GB RAM ပါ, ကျောဘက်တွင်အလွန်လျင်မြန်သောလက်ဗွေစကင်နာနှင့်နားကြပ်ပေါက်ပင်ရှိနေသေးသည်. ထူးခြားသောလက္ခဏာများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်သည်, မှတဆင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ 25MP selfie ကင်မရာရိုက်, ကျောဘက်ကအရမ်းကောင်းတဲ့ 48MP ကင်မရာ.
အားသွင်းမြန်, ကြာရှည်စွာဘက်ထရီသက်တမ်းရှိသည်, အလွန်ကောင်းမွန်သော In-hand ခံစားမှုနှင့်ဖန်ခွက်အတွင်းရှိအရောင်ရင့်ရောင်ပြန်ဟပ်သော V-shaped ပုံစံသည်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်. ဂုဏ်ပြုရဲ့မှော် UI ကို 2, Android ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့9ဌပနာမုံ့, OnePlus ရဲ့ OxygenOS ကဲ့သို့အတော်လေးမကောင်းဘူး, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့နှစ်နှစ်မှသုံးနှစ်အထိမွမ်းမံမှုများရနိုင်သည်.
£ 500 ထိပ်တန်းဖုန်းများထဲက, သင်ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာချင်တယ်ဆိုရင် Honor View20 ကိုဝယ်ပါ; သင်ပိုကောင်းသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့် software ချင်လျှင် OnePlus 6T ကိုဝယ်ကြလော့.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: ဂုဏ်ပြု View20 ပြန်လည်သုံးသပ်: iPhone XS ၏ဈေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်ဖြင့်ထိပ်ဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်
Pixel3အားလုံး Google ရဲ့ကင်မရာနှင့် software များအကြောင်းပါ. အဆိုပါ 5.5in OLED မျက်နှာပြင် 2019 ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများကသေးငယ်သည်နှင့်ထိပ်နှင့်အောက်ခြေမှာကြီးမားတဲ့ bezel ရှိပါတယ်, ဖုန်းကသူလိုတာထက်ဖုန်းကိုပိုကြီးအောင်လုပ်ပေးပြီးရက်စွဲကိုကြည့်ပါ.
ဒါပေမယ့် Google ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုတည်းနောက်ဘက်ကင်မရာ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ software နှင့်မြန် updates များကိုသို့ဝယ်ယူရကျိုးနပ်ကြသည်. စွမ်းဆောင်ရည်ကကောင်းပေမယ့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကနည်းနည်းအားနည်းနေတယ်. သင်သေးငယ်တဲ့ဖုန်းကိုလိုချင်လျှင်ဝယ်နှင့် Samsung Galaxy S10 သင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Google က Pixel3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: Android အတွေ့အကြုံအတွက်ဘားကိုမြှင့်တင်ခြင်း
ပိုကြီးတဲ့ Google Pixel3XL တွင် Pixel ပြုလုပ်သောအရာအားလုံးရှိသည်3တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဖုန်း, ဒါပေမယ့် screen ရဲ့ထိပ်မှာကြီးမားတဲ့ထစ်နှင့်အတူပိုကြီးသည်. ၎င်းသည်၎င်း၏သေးငယ်သောမောင်နှမများထက်ကိုင်တွယ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲပြီးစျေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ်. Pixel ကိုသဘောကျရင်3ဒါပေမယ့်ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ချင်တယ်, ဒါကမင်းအတွက်ဖုန်းပါ, ဒါပေမယ့်ခြုံပြောရရင်တော့သေးငယ်တဲ့ဗားရှင်းကလူအများစုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုပါ. အိမ်ထောင်ဖက် 20 Pro ဟာပတ် ၀ န်းကျင်မှာပိုကောင်းတဲ့ screen ကြီးတစ်လုံးပါ.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Google က Pixel3XL ပြန်လည်သုံးသပ်: ကြီးမားနေဆဲလှပသည်
Xiaomi က Mi ရောနှော 3
Xiaomi ၏ပထမ ဦး ဆုံး slider ဖုန်းသည်အများဆုံးငွေထက်ပိုပေးသည်, အဘို့အထိပ် - လေယာဉ်ခရီးစဉ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ 2018 OnePlus 6T နှင့် Honor View20 နှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း. ၎င်းသည် selfie ကင်မရာကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး၏ဒီဇိုင်းတွင်မည်သည့်နေရာ၌ထားရမည်ကိုပြသရန်ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, လျှောထွက်အပိုင်းရှိဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေခြင်း.
ကောင်းသော, ဒါပေမယ့်အတော်လေးအဖြစ်ကြီးမြတ်သည်၎င်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှု, ဤကြီးမားသောဖုန်းကိုအလေးချိန်အလွန်ကြီးပြီးဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွေ့အကြုံကမကောင်းသကဲ့သို့မကောင်း, အစိုင်အခဲအမူအရာလမ်းညွှန်ရွေးချယ်မှုများရှိနေသော်လည်း.
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ: Xiaomi က Mi ရောနှော3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: နောက်ဆုံး slider ကတော့ဗြိတိန်ကိုထိုး
Nokia က 8 Sirocco - ကောင်းမွန်သော software ဖြစ်သော်လည်းပျမ်းမျှဒီဇိုင်းနှင့်ကင်မရာ - £ 600
Razer ဖုန်း2– ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်း - £ 500
Sony Xperia XZ3 - ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီတံဆိပ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး - £ 699
LG G7 - ပြိုင်ဘက်များကဲ့သို့မကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ - ပေါင် ၃၇၅
အကောင်းဆုံးစစ်မှန်တဲ့ကြိုးမဲ့နားကြပ်: AirPods, Samsung က, Jabra နှင့် Anker တို့သည်နှိုင်းယှဉ်။ အဆင့်သတ်မှတ်သည်
← မှတ်သားလောက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အ EaseUS Data Recovery Wizard ကိုအခမဲ့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသုံးပြုခြင်း ဂုဏ် 20 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →